Chikwata, Manifesto, Museum, Encounter, Game: 6 Mazano ekubuda muBordeaux vhiki ino ye 17-19 May 2019 - TELES RELAY
HOME » mwe »Chikwata, Manifesto, Musangano, Musangano, Mutambo: 6 Kubuda Kwemazano muBordeaux Iyi Vhiki yeChishanu-17 May 19
Concert, kuratidzwa, miziyamu, misangano mutambo: 6 kwavaizoenda pfungwa Bordeaux kupera kwevhiki rino 17-19 May 2019
Iyi vhiki yevhiki 17 19 May 2019, Chaizvo Bordeaux inopa maruva matanhatu muguta rako raunoda. Uye pane chimwe chinhu kune vose!
Yakatumirwa pa 17 May 19 ku 13: 00
Mutambo weZigaro unokokwa kuFnac Bordeaux uyu Mugovera. (© HBO)
MuGironde, vhiki yevhiki ino haitarisi zvakanaka. Zuva rinofanira kuva risipo kubva pamakakatanwa e 17 ku19 May 2019. Zuva regungwa pamhenderekedzo yegungwa kana kuti Bay of Arcachon inowira mumvura. Usavhunduka, kune chimwe chinhu chaunofanira kunetseka nazvo Bordeaux.
Chikwata pamhenderekedzo yeGaronne
Uyu Chishanu manheru, kubva ku21h30, tavern Chez Alriq inoronga kambani yeOpsa Dehëli, pamwe chete Bordeaux.
"Mumugwagwa uchichera mutsara pakati peBalkans neLatin America, boka rine rifumi yezvigadzirwa (clarinet, violin, saxophone, kuparadzanisa kwemarudzi ose) uye simba rekukurukura rakasvetuka pachigarire muzara rezara, ne 'Album yekutanga "Resaca Bailón" iyo ichapemberera kusunungurwa nesu, "inotaura sangano.
Kusununguka kune vana pasi peCNUMX. 10 € kwemakore anopfuura 7. Basa reBar uye pa-site catering. Quai des Queyries ku Bordeaux.
Uyu Mugovera 18 ungave, ihwohwo husiku hwemamyuziyamu muFrance yose. Kunze kwekunze, ivo vanosununguka kune vanhu pachena pasina maawa 18 kusvika pakati peusiku. MuBordeaux, 14 inobatanidzwa muchiitiko chacho. Heino mutsara:
Bordeaux Métropole: 14 musimusi zvakasununguka pasina usiku hwe18
Uyu Mugovera 18 ungave 2019, 14 museum yeBordeaux Métropole yakazarura masuo avo kuvanhu pachena, kubva maawa 18 kusvika pakati peusiku. Heino mutsara wezvikamu zvinobatanidzwa.
Game of Thrones inozvikoka pacheche Ste-Catherine
Uyu Mugovera 18 May, mushanduri wemutambo weTeam of Thrones anouya kuzosangana nevaFnac Bordeaux kuzokurukura epilogue yezveruzhinji. Mamwe mashoko:
Gironde: Mutauro wechiFrench weThe Game of Thrones saga anouya kuFnac de Bordeaux
Uyu Mugovera 18 angangodaro 2019, mushanduri wemutambo weWorld of Thrones anotarisirwa kuFnac, iri mu rue Sainte-Catherine muBordeaux. Mukana wekutsinhanisa wakapoteredza nguva ye8 ...
Uyu musi weMugovera 18 May, mhirizhonga inorongwa muBordeaux kurwisa Monsanto uye zvakanyanya kupikisana nekemikari yekurima uye kushandiswa kwemishonga inouraya. Zvimwe zvakawanda:
Kuenzanisira: kufamba kunorongwa muBordeaux kurwisa Monsanto, giant ye pesticides
I18 inogona kunge iri 2019, maratiro anopikisa anotanga kubva kuEcocitoyenne House yeBordeaux, pedyo nebhiriji raPeter, kurwisana nekemikari yekurima uye kushandiswa kwezvipembenene.
A concert huru yeDisiz denda
Pamusangano we2e, May Day Music Festival inodzorera uyu May 18 pamusasa weTalence, pedyo neBordeaux, ine purogiramu yemimhanzi yekutanga.
Mureza weFrance Disiz denda richava gurukota. Uye nhau dzakanaka: yakasununguka! Purogiramu yakakwana:
Talence: Disiz denda iri musangano risina rusununguko pedyo neBordeaux, uyu Mugovera 18 mai
Chikamu cheTalence chinoshandisa shanduro ye2 yeMayday Student Music Festival kune dzimwe nyika. Mamwe makonti asingabhadhari anorongwa ...
Iyi Svondo 19 inogona, iyo bar Sei usingaiti sangano reSvondo Games kubvira maawa 17 uye kusvika pakati peusiku nemitambo yakawanda yakadai seContrario, Blitz, Smallworld, 7 Wonders, The Knights of Rail ...
Iwe unogona kuuya woga, neshamwari kana mhuri, kutamba nekunwa uye sandwich.
Manheru manheru. Inowanikwa munzvimbo ye Union Union-Jean, 97 Malbec mumugwagwa muBordeaux.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/concert-manif-musee-rencontre-jeu-6-idees-sortie-bordeaux-ce-week-end-17-19-mai-2019_23815964.html
Un conducteur surpris en train de regarder du porno après l'avoir accidentellement joué sur un haut-parleur de train au Royaume-Uni – xnxx
Cameroon: Kuzvidzivirira kwakapinda muuto revanhu vanopfidza vasiri varwi vekare
Kit Harrington Inotsanangura Ku "Game of Thrones" Vavengi Vanoti "Vanogona Kusviba" - BGR
Kumadokero kwakadziva: Rufu rweA4 mwana nemwedzi wemwedzi: Utsinye hwakaipa hwaVaAkere Muna